Serivisy fanamboaran-by metaly - OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Fanodinana vy fanodinana serivisy-OEM Shina mpanamboatra faritra vy
Misaotra ireo injeniera efa za-draharaha 10 sy andiana fitaovana mandroso 30 mahery, Ouzhan dia mahay amin'ny làlan'ny haino aman-jery vy mandritra ny 15 taona. Ouzhan dia manampy anao handrindra ny volavolanao vokatra amin'ny alàlan'ny DFM ary manome antoka fa azo ampiorina tsara, mandaitra ary amin'ny kalitao mifanaraka amin'ny famaritana anao ny faritra metaly ataonao. Mino mafy izahay amin'ny fanaovana jig kalitao ho an'ny welding mba hanamorana ny fanaraha-maso. Ny ERP dia ahafahantsika mitantana ny famokarana vokatra vita vita amin'ny SKU marobe.
Ny vokatra sarotra indrindra vokarina hatreto dia vita amin'ny singa 320. Manana fahaiza-manao matanjaka izahay amin'ny famolavolana kojakoja vita amin'ny metaly matevina. Ny tsipika fivoriambe efatra dia afaka manohana ny dingana faharoa sy ny famaranana toy ny welding, riveting, fonosana vovoka, anodizing ary ny assemblation. Afaka manome serivisy fivorian'ny fivoriambe ihany koa izahay na manatitra vokatra vita.
Ouzhan Precision Sheet Metal Processing capacities:
OuZhan dia manana fahaizana manome serivisy fanamboaran-taratasy vita amin'ny metaly manara-penitra sy vokatra avo lenta avo lenta ho an'ny tetikasa marobe.
- Serivisy fanamboaran-taratasy vita amin'ny metaly mihaja ho an'ny baiko antonony hatramin'ny avo.
- Be dia be ny fitaovana vy tsy voatery.
- Karazan-hatevin'ny machinable (0,5mm-20mm).
- Fitaovana marobe mandroso sy rafitra fanaraha-maso ambony.
- Teknolojia fanodinana ambaratonga faharoa sy matihanina.
- Famokarana matanjaka sy fotoana fandefasana haingana.
Maninona no misafidy ny serivisy fanamboarana vy vita amin'ny vy Ouzhan
• Laser Cutting CO2 sy N2
• CNC Sheet miondrika Axis 4 & 6
• TIG, MIG, nohitsakitsahana
• Robot Welding (Robot ABB Robot 1410 miaraka amin'ny rafitra fanamafisana Fronius)
• Jig vita amin'ny namboarina
• Fanamarihana mihombo
2. Fahaiza-manao dingana faharoa
Ankoatry ny fametahana metaly metaly dia manokanay manokana amin'ny TIG sy MIG, Welding Robot, Welding Spot, CNC Sheet Bending, Riveting, PEM, Laser Etching, sns. Noho izany dia azonao atao ny mahazo karazana takelaka metaly marobe avy amin'ny ekipa atokisantsika.
3. Hery R&D matanjaka
Manana injeniera 10 ao amin'ny ivon'ny R&D izahay, dokotera na profesora avy ao amin'ny University of Science and Technology of China avokoa izy rehetra. Azontsika atao ny manolotra serivisy fanodinam-by metaly tena matihanina sy serivisy fanodinana vy.
4. Fanaraha-maso ny kalitao henjana (ISO 9001: 2008)
Manana mpiasa sy fitaovana fanaraha-maso kalitao matihanina izahay, araka ny fenitra iraisam-pirenena amin'ny vokatrao mba hitsapana, ary mamoaka tatitra momba ny fitsapana amin'ny antsipirihany ho an'ny faritra vy amin'ny mpanjifa.
5. OEM & ODM ekena
Misy habe sy endriny namboarina. Tongasoa eto amintsika hizara ny sarinao momba ny vy vita amin'ny takelakao aminay, andao hiara-hiasa mba hamorona kokoa ny fiainana.
Inona no fiasan'ny Sheet Metal & Ahoana ny fiasan'ny Sheet Metal Metal
Ny metaly takelaka dia tsy fitaovana manokana. Fa kosa, ny teny dia ampiasaina amin'ny metaly izay nanjary endrika. Toy ny fitsipika, ny metaly metaly dia manana endrika mahitsizoro. Izy io koa dia mampiavaka azy fa ny hatevin'ny ravina dia somary ambany noho ny halavany sy ny sakany.
Ho fanampin'ny vy, metaly maro hafa toy ny varahina, alimo ary volamena ary koa ny alimo varahina dia azo zahana ho metaly. Mba hitrandrahana ho metaly fanitso anefa dia tokony hanana toetra manokana ireo fitaovana ampiasaina, izany hoe henjana sy henjana, ary mazava ho azy fa mora ductile, azo formable. Ireo fepetra takiana ireo dia miteraka fameperana mikasika ireo fitaovana azo ampiasaina. Noho izany, tsy azo atao ny manodina akora tena marefo na henjana be ho lasa vy.
Araka izany, ny metaly takela-by dia vokatra semi-vita izay azo vokarina amin'ny faritra midadasika, izay maivana, manify, miorina, lasitike ary fisaka amin'ny ankapobeny. Noho ireo tsipiriany ireo dia mety amin'ny karazana akanjo sy firakotra rehetra izy ireo. Ho fanampin'izany, ny metaly takelaka dia azo ovaina amin'ny fomba maro, izany hoe azo alefa, hiondrika, totohondry na hokapaina. Ny karazany isan-karazany dia azo atao amin'ny metaly takela-by, ka izany no antony ampiasana azy ireo ho toy ny akora fanombohana vokatra marobe.
Ny teny hoe "fanodinana vy" dia manarona dingana maro amin'ny famokarana. Amin'ny ankapobeny, ny teny hoe metaly miasa dia manondro ny fanamboarana vokatra, singa ary ampahany vita amin'ny vy. Ankoatry ny welding, fanapahana ary miondrika, ny dingan'ny fanodinana vy dia misy koa ny totohondry, mamorona, mihodina ary manatevin-daharana. Ny fananganana metaly takelaka dia matetika koa ao anatin'ny fanodinana vy, miaraka amin'ireto sokajy manaraka ireto:
• Fananganana vy
• Famoronana sosona
• coil fanafanana
• Manindrona totohondry
• fanapahana laser
• Fanodinana laser
Ao anatin'ny sehatry ny fanodinana vy, azo atao ny mamokatra ravina malemy sy mahatohitra, izay ahatongavan'ireo alloys samy hafa ny toetra samihafa. Ohatra, misy singa marobe izay azo ampiana vy amin'ny fatran'ny rano mandritra ny fametahana vy ary mamaritra ny fananana vita amin'ny metaly vita amin'ny metaly. Ho fanampin'ny silika, nikela ary chromium, ireo singa ireo dia misy koa titanium, varahina, niobium ary molybdenum.
Fitaovana fanodinana metaly takelaka - Fitaovana ampiasaina amin'ny famolavolana Sheet Metal
Fitaovana azo ampiasaina amin'ny milina Sheet Metal
• Hot Rolled Steel (HRS)
• Stainless vy (SS304, SS316, SS301)
• Takelaka varahina
Fampiharana an'ny serivisy fihodinan'ny CNC sy ny faritra
Famaranana ny tontolon'ny famolavolana vy vita amin'ny vy Ouzhan
Ity misy safidy betsaka amin'ny serivisy famaranana vy amin'ny safidinao ho an'ny faritra metaly vita amin'ny metaly hanatsara ny fisehoan'ny faritra, ny malama, ny fanoherana ny harafesina ary ny toetra hafa:
① Toy ny masinina (mahazatra): ~ 125 RA µin (3.2 RA µm). Ny marika fitaovana kely dia ho hita eo.
② Voamaina: ny masinina dia milina amin'ny taha ambany amin'ny famahanana mba hahatratrarana ~ 62.5 RA µin (1.6 RA µm). Ny fahasarotan'ny velarana dia azo ahena hatramin'ny ~ 32 RA µin (0.8RAµm) raha angatahina.
③ Bead Blasted: Ny famaohana vakana dia manampy matte na satin vita amin'ny satina amin'ny ampahany milina, manala ny mariky ny fitaovana rehetra. Ampiasaina indrindra amin'ny tanjona estetika.
④ Anodized Clear na Color: Ny anodizing dia manisy firakotra keramika manify, mafy, tsy mitarika eo ambonin'ny faritra aluminium, mampitombo ny harafesiny sy ny fanoherany. Hita amin'ny loko isan-karazany.
⑤ Hardcoat Anodized: ny anodizing Hardcoat dia mamoaka firakotra seramika matevina manome harafesina sy fanoherana tsara. ho an'ny fampiharana miasa.
⑥ Vovoka mifono vovoka: ny firakotra vovoka dia manisy soson-doko manify miaro, mitafy ary manimba harafesina manoloana ny faritra iray. Hita amina loko maro loko.
⑦ Elektrôlika: ny elektrôlika dia dingan'ny elektrika izay ampiasaina handotoana, hivezivezy ary hampihena ny vy. Ilaina izy io mba hampihenana ny fahamendrehana ambonin'ny tany.
⑧ Oxyde mainty: Oxyde mainty dia fonosana fanovana ampiasaina hanatsarana ny fanoherana ny harafoana ary hampihena ny taratry ny hazavana.
⑨ Famonoana fiovan'ny chateate (Alodine / Chemfilm): ny fandrakofana fiovam-po Chromate dia ampiasaina hanamafisana ny fanoherana ny harafesin'ny metaly ary mitazona ny toetrany mitondra.
⑩ Fanosotra: Ny fikosehana dia vokarina amin'ny alàlan'ny famolahana ny metaly amin'ny grit ka miteraka famaranana satin tsy misy fitarihana.